Maxkamadda ICJ oo u xukuntay Soomaaliya inta badan dhul badeedkii ay isku hayeen Kenya | Berberanews.com
Home WARARKA Maxkamadda ICJ oo u xukuntay Soomaaliya inta badan dhul badeedkii ay isku...
Maxkamadda ICJ oo u xukuntay Soomaaliya inta badan dhul badeedkii ay isku hayeen Kenya
HAGUE —(Berberanews)- Maxkamadda Caalmiga ah ee ICJ ayaa go’aan ka gaadhay kiiska dacwadda badda ee u dhaxeeyey dalalka Soomaaliya iyo Kenya, iyada oo diidday doodda ugu weyn ee Kenya oo aheyd inuu jiro xad u dhexeeya labada waddan oo la barbar ah xarriiqa loolka.
Doodda labada dal ayaa aheyd, iyada oo Soomaaliya uu mowqifkeedu ahaa in xadaynta lagu saleeyo laynka tooska ah ee ku astaysayn xuduudda badda, halka Kenya ay dooneysay in xarriiqda lagu saleeyo loolka.
Maxkamadda ayaa sameysay xarriiq cusub oo ah xuduud badeedka labada dal. Sida ka muuqata xarriiqda cusub, inta badan dhul-badeedkii ay sheegatay Kenya waa la diiday, waxaaa loo xukumay Soomaaliya. Hase yeeshee inyar ayaa sidoo kale laga reebay dhul-badeedkii ay sheegatay Soomaaliya, oo ka bilaabma kadib 12 mile xarriiqda tooska ah ee ku aadan xuduuddda dhulka.
Dhul badeedkii la isku hayey ayaa dhan 100,000km isku wareeg ah.
Dowladda Kenya ayaa hore u sheegtay in aanay u hoggaansami doonin go’aanka Maxkamadda. Kenya ayaa sidoo kale marar badan ku guul-darreystay isku day ay ku dooneysay in wada-hadal lagu dhammeeyo kiiska.
Dowladda Soomaaliya ayaa dacwadda badda gudbisay sannadkii 2014, xilligii uu madaxweynaha ahaa Xasan Sheekh Maxamuud.
Previous articleMaxaad ka ogtay qisada jacaylka ee fanaankii Shay Mire Dacar
Next article“Anigu ma ihi nin haweenka la tirsada” Xildh Barkhad